Maamulka Garbahaarey oo sharaxay Sababta Axmed Madoobe loogu diiday inuu tago Magaaladaas – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAMaamulka Garbahaarey oo sharaxay Sababta Axmed Madoobe loogu diiday inuu tago Magaaladaas
Maamulka Garbahaarey oo sharaxay Sababta Axmed Madoobe loogu diiday inuu tago Magaaladaas
November 12, 2018 Falastiin Axmed WARARKA MAANTA Comments Off on Maamulka Garbahaarey oo sharaxay Sababta Axmed Madoobe loogu diiday inuu tago Magaaladaas
(Warqaat.com)—Dibadbax ka dhan ah Madaxweynaha Mamaulka Jubbaland ayaa shalay ka dhacay Magaalada Garbahaarey ee Xarunta Gobolka Gedo, kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in uu ku wajahan yahay Madaxweynaha Maamulka Jubbaland.
Maamulka Gobolka Gedo iyo kan Degmada Garbahaarey ayaa sheegay in Safarka madaxweynaha aan ku qanacsaneen shacabka Degmada, sidaasne uu ku dhashay isku soo baxooda.
Sababo dhowr ah oo isbiirsaday ayay ku sheegay in loo diidan yahay socdaalka Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) .
Aadan Bare Dhageey Gudoomiye ku xigeenka Degmada Garbahaarey oo ayaa sheegay in 7-sano uu xilka hayo aan Madaxweynaha Jubbaland tagin Gobolka Gedo.
Mudadaas ayuu tilmaamay in ay ka dhaceen Tacadiyo ay geysteen Ciidamada Kenya, Dagaal Beeleedyo iyo Fatahaad saameeyay Dadka Gobolka.
Ciidamada Kenya waxa uu sheegay in Degmooyinka Gobolka ay duqeymo ku waxyeeloobeen shacab ka geysteen, sidoo kalena ay kufsadeen Haween, madaxweyne Axmed Madoobane aan ka hadlin sida uu hadalka u dhigay.
Khilaafka ka dhex jira Dowladda Federaalka iyo Maamulka Jubbaland ayuu sabab ugu dhigay in ay qayb ka tahay waxyaabaha keenay in ay kacaan Dadka Gobolka Gedo.
Wasiirada Amniga iyo Arrimaha Gudaha Jubbaland ayaa wado isku dayo ay ku doonayaan in ay ku dajiyaan Shacabka Gedo si aanu u baaqan Safarka Madaxweynaha uu u qorsheeyay Gobolka.
Lama ogo in Madaxweynaha Jubbaland uu dib ugu laabtay go’aankiisii ahaa in uu tago Gobolka Gedo iyo in kale.
Wasiir Oomaar oo ka dab saaka ka kacay Garoonka Aadan Cadde
Ganacsato leh xarumo waa weyn oo canshuur darteed xabsiga Muqdisho loo dhigay”Yaa kamid ah
668,504 total views, 4,379 views today
668,504 total views, 4,379 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
668,376 total views, 4,378 views today
668,376 total views, 4,378 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
668,405 total views, 4,378 views today
668,405 total views, 4,378 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
668,469 total views, 4,380 views today
668,469 total views, 4,380 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
668,526 total views, 4,379 views today
668,526 total views, 4,379 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]